I-CASA VISTA • amava, ubugcisa kunye nendalo - I-Airbnb
I-CASA VISTA • amava, ubugcisa kunye nendalo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGuilherme
@CasaVista lufakelo lokuqala olusisigxina lokuzimela lokuzimela olukhoyo ukuze lubanjwe kwi-AirBnb.
Ifumaneka kwi-Extrema-MG, ngaphantsi kwe-100km ukusuka kwisixeko saseSão Paulo, sinokubamba ukuya kuthi ga kwi-4 abantu kwindawo yangasese ye-10,000 m2. Sinikezela ngamava oqhagamshelwano olunzulu kunye nendalo, ubugcisa kunye noyilo.
Ukuba ujonge ixesha lokuhlaziya, impembelelo kunye nobukho-indawo yakho ilapha.
Landela i-instagram yethu @casavavista
*Ikhalenda yethu isexesheni ku-Airbnb - imihla ebonakala ikhethwa yileyo sele ikhona*
/ IMBONO YEZINDLU
Khawufane ucinge Ukuhlala kwindawo eyi-100% eyilwe ngamagcisa, apho indlu, ibhedi, isitulo, isinki kunye nofakelo kwisiza esingaphezulu kwe-10,000 m2 yimisebenzi yobugcisa. Indlu ebonwayo ibonelela uluntu ngokuntywiliselwa okunzulu kumoya wobugcisa - ngendlela ethatha inxaxheba - ngamava kunye nezenzo ezizinzileyo, ngaphezu kokuqhawulwa konxibelelwano kwihlabathi lenyani kunye nokunxibelelana nendalo ngobugcisa.
Isiphephelo sethu sokuzimela sinamandla elanga, amanzi okusela avela kumthombo wendawo, igadi yeziqhamo kunye ne-greenhouse enegadi yemifuno ekhoyo kwi-end-to-end experience yokucwiliswa ngokuqhagamshelana nendalo.
/ INDAWO YOKUHLALA
Indlu eyi-60m2 ineesuti ezimbini (ezine-air conditioning) kunye nomthamo wabantu abane, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi elidibeneyo. Ngaphakathi, imisebenzi yobugcisa efana nezihlalo zengalo kunye neesinki ezisayinwe ngumculi we-Sanches kunye nezinye izinto ngabaqulunqi abaphumelele amabhaso afana ne-Wentz, i-Prototype, i-Noori kunye ne-Zissou, igqibezela induduzo kunye nokuhlobisa ngamava adibene nemisebenzi yobugcisa.
Ngaphandle, idekhi ye-50m2 inedama elincinci labucala, umgodi womlilo kunye nechibi lendalo elijonge iintaba zaseSerra da Mantiqueira. Indlu ikwanesakhiwo sokwenza ukucamngca, iYoga, phakathi kweminye imisebenzi kunye nemidlalo ejolise ekwaziseni abantu.
I-WIFI yethu isantya se-4G (ikhulisa isignali ye-VIVO) kwaye yenza ukusetyenziswa kochungechunge, iimuvi, ukusasazwa kunye nokukhangela kwi-intanethi. (Ayikhuthazwa kutshintshiselwano lwedatha ephezulu kunye neefayile ezinzima kwaye zinokuchaphazeleka kutshintsho lwesignali okanye ukuphazamiseka kwimeko yemozulu embi)
/ AMAVA OKUGQIBELA
Sikholelwa kwi-gastronomy njengendlela yobugcisa, kunye noqhagamshelwano olunzulu kwizinto zendalo kunye nokubonakaliswa kwenkathalo kunye nobuchule. Njengoko siyimizuzu engama-20 ukusuka kumbindi we-Extrema, sinikezela ngesakhiwo sekhitshi kunye nezixhobo ukuze wenze ukutya kwakho. Ukongeza kwisakhiwo sangaphakathi, indlu yethu ine-barbecue ye-Noori - leyo, ngaphezu kwe-barbecue, i-oven yomlilo kunye ne-pizza.
*Sineoveni encinci yombane.
*Isixeko sikubude bemizuzu engama-20 unamaziko avula yonke imihla, sicebisa ukuba uze nazo zonke izinto ozithengayo.
Malunga neekhilomitha ezingama-20 ukusuka eCasa Vista, kukho iindlela ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yezemidlalo efana ne-rafting, ukunyuka kunye nokuxhoma ukutyibilika. Ukongeza, sabelana ngeengcebiso ezivela kwiindawo zokutyela kunye namashishini asekuhlaleni abonisa iingcambu zemigodi ngokubanzi.
Ukufikelela: phantse yonke indlela igangathiwe, ngaphandle kwe800m yokugqibela. Xa sifika kwindawo esingqongileyo, indlela yokungena endlwini ebonwa yi-200m yendlela yomhlaba. Ngamaxesha emvula enkulu (Okthobha-Matshi, ngokuxhomekeke kuhambo lwakho) ukufikelela kunokuba nzima kwaye sincoma i-4x4 - ukuba awunayo, sineqabane lasekuhlaleni elenza le ndlela kwaye siya kukuqhagamshela ngaphambi kokuhlala kwakho. .
Ekufikeni kwakho eCasa Vista, uya kuzijonga kwaye uya kuncediswa ngo-whatsapp liqela lethu ukuba kukho nayiphi na imibuzo.